Kutenderera dressage munzira yakatetepa Virserum kuenda Åseda | Shanyira Hultsfred
Kutenderera dressage munzira yakatetepa Virserum kuenda Åseda
musha » Ona & ita » Mabasa » Kuchovha bhasikoro » Kutenderera dressage munzira yakatetepa Virserum kuenda Åseda
Kutenderera dressage munzira yakatetepa Virserum kuenda Åseda.
Pakati pechiteshi cheVirserum pane nostalgia nharaunda inopa rwendo kudzoka munguva. Kupfeka kuendesa muhwindo yetikiti, pre-kubhuka asiwo kudonhedza-mukati zvichienderana nemadhiresi aripo.
Kubva kuVirserum unogona kutenderera nzira yese kuenda kuEseda, chinhambwe che29 km. Iwe unosarudza kureba kwaunoda kutenderera.
Kana iwe ukatenderera hafu yezuva (maawa mana), iwe unenge uine nguva yekutenderera kuenda kumusha weTriabo murunyararo uye murunyararo. Iko kune nzvimbo yepikiniki ine swings, mabhenji uye barbecue nzvimbo. Virserum-Triabo iri 4 km kuenda nekudzoka. Iwe unotenderera kuburikidza nezvisikwa zvisikwa, wapfuura idyll Hjortöström uye pamwe nemadziva anopenya. Mune imwe nzvimbo, njanji inoenda kubhangi yakananga nemugungwa!
MuHjortöström neAggatorp mune mabhenji nematafura ebreak uye kune ese jecha pamhenderekedzo nematombo pane yakatambanudzwa. Muhwindo rematikiti muVirserum mune zvinwiwa zvinotonhorera uye zvihwitsi pamwe nemabhuku nemafirimu kune avo vanofarira njanji uye nhoroondo, ICA Nära iri padhuze nechiteshi, uko zvese zviri zvepikiniki.
57 wongororo paGoogle
3/5 4 mwedzi yapfuura
Rumbidzo kusangano rinoita tsika yechiitiko uye rinopa chiitiko chisingakanganwike mumakwara enhoroondo. Asi funga kushandisa nzeve / mahedhiyo sezvo zvipfeko zvinonzwika zvakanyanya. Izvi vanofanira kuzivisa nezvazvo.
1/5 4 mwedzi yapfuura
+ Hunhu hwakanaka, chiitiko chinonakidza. - Vashandi vasingazivikanwe Virserum vachidzoka, - vashandi vasingafadzi mu Åseda kwataidzingwa patiraki tisati tambomira pataive tiri kure kune vatengi vavo sekureva kwatete ikoko. Chiitiko chinofinha nekuda kwevashandi vasina basa / vasingafadzi.
5/5 2 mwedzi yapfuura
4/5 6 mwedzi yapfuura
Yakanaka kwazvo Nhungamiro Yakanaka
5/5 gore rapfuura
Rwendo rwakanaka kwazvo! Kutenderera kubva kuEseda kuenda kuVirserum, kudzika kuVirserum kumusoro! Ikozvino kune chikamu cheStrava zvakare 😊 Hazvinetsi kurova!
Kutenderera dressage munzira yakatetepa Flaten - Gårdveda
Dackestupet - makomo kuchovha uye makomo kuchovha
Kutenderera dressage munzira yakatetepa Hultsfred kuenda kuMarlilla
Yese bhasikoro uye dressage nzira
Isu ku visithultsfred.se tinoremekedza zvakavanzika zvako uye tinokoshesa hukama hwatinahwo newe. Isuwo tinonzwisisa kuti unogona kunge uine zvinetsekana nezve zvakavanzika zvako uye mashandisiro atinoita makuki. Kufanana nevamwe vazhinji, webhusaiti yedu inoshandisa tekinoroji kuunganidza ruzivo rwunotibatsira kuvandudza ruzivo rwako pamwe nezvigadzirwa nemasevhisi. Horaiti!